ဝါးတီး နှင့် တောက်တောက်တောက် ~ စန္ဒကူး
ကျွန်မဆရာရဲ့သမီးကြီးက Elementary Graduation Program ကိုဒီနေ့သွားတယ်။ နေ့လည်ကတော့ မြန်မာအဖွဲ့နဲ့ သူရဲ့ဆရာတွေဆရာမတွေကိုခေါ်ပြီး နေ့လည်စာကျွေးတယ်... အမှန်က ၁ နာရီမှစမှာ။ ကျွန်မက ရုံးက နေ့လည်စာစားချိန်နဲ့ မှန်းပြီးသွားလိုက်တော့ ၁၂ နာရီကြိုရောက်နေတော့လုပ်စရာမရှိတာနဲ့..ဆရာ့အိမ်က စန္ဒယားကို ပျင်းပျင်းနဲ့တီးနေလိုက်တယ်... စန္ဒယားကိုလက်နဲ့စထိတာ (၁၀)နှစ်ကျော်မှာ ဒါပထမဆုံးအချိန်ဘဲ... ကျွန်မငယ်ငယ်က မာမီက အတင်းကိုသင်ခိုင်းလို့ ၄-၈တန်းအထိ သင်ခဲ့ရတယ်..၀ါသနာတော့လုံးဝမပါဘူး...အမေဆူမှာကြောက်လို့သာသင်ခဲ့ရတာ...အခုတော့ စန္ဒယားကိုလက်နဲ့ပြန်စထိတော့မေ့နေပြီ... နဲနဲတော့သတိရသေးတယ်... ဒါနဲ့ဘဲလူစုံတော့အစားတွေစားကြတာပေါ့...စားမယ့်ဟာတွေကတော့အစုံဘဲ...အထူးသဖြင့် ဒံပေါက်..ထောပတ်ထမင်း၊ ပဲပြားသုပ်၊ ခရမ်းသီးအုန်းနို့ချက်၊ ငါးဟင်း၊ အာလူးချောင်းကြော်....အစုံအစုံပါဘဲ၊
ညနေကျတော့ ၆း၀၀ နာရီမှာ ဘွဲ့နှင့်သဘင်လိုမျိုးပေါ့..အစီအစဉ်စတယ်။ ကျွန်မမပြင်မထွက်ခင် ခန်းမကိုရောက်နှင့်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က ပန်းဝယ်လာခဲ့ကူးကူး..သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပန်းစည်းပေးဖို့ ဆိုတော့ ကျွန်မလဲပန်းဝယ်ဖို့လိုက်ပတ်ရှာတာ ပန်းဆိုင်တွေလဲပိတ်ကုန်ပြီ၊ ကျွန်မတော်တော်ခေါင်းစားသွားတယ်. နောက်ဆုံးတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီးပန်းပင်လေးတွေ ပျိုးရောင်းတဲ့နေရာမှာ သစ်ခွတစ်ပင်ပန်းအိုးနဲ့ အပွင့်ကခရမ်းရောင်ရင့်ရင့်တွေ..အဲဒါဘဲဝယ်ပြီးတော့ အရောက်သွားလိုက်တယ်... ကလေးတွေသင်တန်းဆင်းတယ် ဆိုတော့ ပျော်ကြတာပေါ့... ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြ.. လူတော့သိပ်မများပါဘူး။ အရှေ့မှာထောင်ထားတဲ့အလံကိုကြည့်လိုက်တော့ (၃) ခုဘဲ.. ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိလိုက်ပါပြီ။ ကျောင်းဆင်းတဲ့ကလေးတွေ ၁၇ ရောက်က (၃) နိုင်ငံကဘဲလာတယ်ဆိုတာ.. မြန်မာအလံလဲပါတော့ နဲနဲတော့ ဂုဏ်ယူမိသား။ နောက်တစ်ခုက ကိုးရီးယားအလံ..နောက်တစ်ခုကတော့ အနောက်နိုင်ငံတစ်ခုခုပေါ့...
အားလုံးလဲပျော်ကြပါတယ်။ အစီအစဉ်တွေအားလုံးပြီးတော့ ဆရာ့အိမ်မှာ ဒံပေါက်တွေကျန်သေးတာ ကိုပြန်သွားစားကြတယ်။ မနေ့တစ်နေ့က ကျောင်းသားအသစ်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်လေ။ သူရယ် ကျွန်မသူငယ်ချင်းကိုကြီးရယ်။ ကျွန်မနဲ့ ကျောင်းနေဖက် ဘွဲ့ယူသွားတဲ့တစ်ယောက်ရယ်..
ဘာရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး..သူတို့ရဲ့ motif အရောင်က အစိမ်းနုလေးတွေ ... Decoration လုပ်ထားတာလဲအရမ်းလှတယ်.. ဘောလုံးလေးတွေလဲအဖြူနဲ့အစိမ်းကိုစပ်ပြီး စီတန်းချထားတာအရမ်းလှတယ်.. အစိမ်းရောင်လေးက အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော်တော်လှတာကိုသတိထားမိတယ်။ ကျွန်မက အနက်ရောင် နဲက အနီရောင်ကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ.. ဒါပေမယ့် အခုတော့အစိမ်းရောင်ကိုကြိုက်တတ်နေပြီ.. Attraction အရမ်းရှိတဲ့အရောင်ပေါ့... စားသောက်ပြီးတော့် ကျွန်မကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းကိုကြီးနဲ့အသစ်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားကလိုက်ပို့တယ်.. ဒီက ဘစ်ကားသေးသေးလေးတွေကိုစီးပြီးတော့ပေါ့... ကျွန်မအဲဒီကားလေးတွေစီးတိုင်းဒုက္ခရောက်တာက ကိုယ်ဆင်းချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်... ပါရာ လို့မပြောရဲတာ.. ပါရာ (ရပ်) ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဒီမှာကမှတ်တိုင်ဆိုတာမရှိဘူး။ ကိုယ်ရှိတဲ့နေရာကနေကောက်တားလိုက်..ကားရပ်ပေးတယ်..ဆင်းချင်ရင် ပါရာ လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်ရုံဘဲ.. အရင်ရောက်ခါစက ကျွန်မဒီကသူငယ်ချင်းနဲ့ မောလ်တွေသွားရင် သူက ကားဆရာကိုပိုက်ဆံလှမ်းပေးရင် ဒါလ၀မ် ဆီလန်း.. လို့ပြောတာကျွန်မက မှတ်မှတ်ထားတာ... သြော်ကားဆရာကို ပိုက်ဆံပေးရင် အဲဒီလိုပြောရတယ်ပေါ့... မှတ်မိသေးတယ်. သူငယ်ချင်းက သူ့အိမ်တောင်ဖက် အပိုင်းကိုပြန်သွားတော့ ကျွန်မမှာလဲမဖြစ်မနေ၀ယ်စရာလေးတွေရှိတော့ တစ်ယောက်တည်းစွန့်စားခန်းက ပြန်လာတော့ အဲဒီ ကားလေးစီးလာတယ်.. ခပ်တည်တည်နဲ့ ဒါလ၀မ်ဆီလန်း လို့ပြောလိုက်တော့ ကားဆရာကကြောင်တောင်တောင်နဲ့လှမ်းကြည့်တယ်.. ကားပေါ်ကလူတွေကလဲရီကြတယ်.. သူတို့ကကျွန်မတစ်ယောက်တည်းတက်လာတာတွေ့တာကိုး.. ဒါလ၀မ်ဆိုတာ နှစ်ယောက်လို့ပြောတာမှန်းနောက်မှသိတော့တယ်.. အဖြစ်ကဂလို.. မနေ့ကလဲ ကိုကြီးကပြောတယ်.နင် ပါရာ လို့ပြောရမှာ ခက်နေရင် လက်ကိုင်တန်းကို အကြွေစေ့နဲ့ သုံးချက်ခေါက်လိုက်တဲ့။ သူတို့ရပ်တယ်တဲ့.. ဒါနဲ့ ကျွန်မက အေး..ဒါဆိုမဆိုးဘူး စကားပြောစရာလဲမလိုတော့ဘူး (ဘာလို့လဲသိလား..ကျွန်မက ပါရာလို့ပြောရဲရင်တောင်သူတို့အသံထွက်မဟုတ်တော့ဝိုင်းဝိုင်းကြည့်ကြတာကိုရှက်လို့) ဒါနဲ့ ကိုကြီးနဲ့ ကျောင်းသားအသစ်က..ကဲခေါက်ဆိုတဲ့အချိန်မှခေါက်နော်.ဆိုတော့ကျွန်မလဲအကြွေစေ့တစ်စေ့ကိုင်ပြီးရယ်ဒီစောင့်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ခေါက်တော့ဆိုတာနဲ့ ကျွန်မလဲ တောက်တောက်တောက်ဆိုပြီး (၃) ချက်လက်ကိုင်တန်းကိုခေါက်လိုက်တယ်။ ကားဆရာကလှမ်းကြည့်တယ်.. ဒါပေမယ့်မရပ်ဘူး.. ဒါနဲ့ဘဲ နေရာကကျော်နေပြီဆိုတော့ ကိုကြီးက ပါးရာ.. လို့ပြောမှဘဲရပ်တော့တယ်...
ကျွန်မတော်တော်စိတ်တိုတယ်..အစုတ်ပလုတ်တွေ..နင်တို့ပြောတော့သုံးချက်ခေါက်ရင်ရပ်တယ်ဆို..အခုတော့နေရာကျော်ပြီ ငါ့အိမ်ပြန်ဖို့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်စီးဖို့မလွယ်တော့ဘူး..ဆိုတော့ ကိုကြီးက အဲဒါ ယောက်ျားလေးတွေခေါက်မှရပ်ပေးတာတဲ့... သူ့ခြေထောက်ကိုနှစ်ချက်လောက်ပြေးကန်လိုက်တယ်... မပြောလိုက်ချင်ဘူး....တော်သေးတယ်အိမ်ကိုချောချောမောမောပြန်ရောက်လို့..ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Posted by စန္ဒကူး at 9:26 AM